Translateapiace where the cuckoo sings in Burmese
Results forapiace where the cuckoo sings translation from English to Burmese
I wish Iran to beacountry where the hejab is not compulsory.
ကျွန်တော်က အီရန်ကို ဟီဂျပ်မဝတ်မနေရ မသတ်မှတ်တဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။
နောက် ရင်ဘတ်နာတာ ဘယ်နားမှာလည်း ဆိုတာ ပြောပြစေချင်တယ်
The disease severity in the community where the business is located affects the responses taken.
လုပ်ငန်းတည်ရှိရာ လူထု အသိုင်းအဝိုင်းတွင် ရောဂါ၏ ပြင်းထန်မှုသည် လုပ်ဆောင်သော တုန့်ပြန်မှုအပေါ် သက်ရောက်သည်။
သူ၏သားငယ်တို့သည် အသွေးကို သောက်တတ်၏။ အသေကောင်ရှိရာအရပ်၌ ထိုငှက်ရှိသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
သို့ရာတွင် ဣသရေလအမျိုးသားနေရာဂေါရှင်ပြည်၌ မိုဃ်းသီးမကျမရွာ။
မတရားသဖြင့် ကျင့်သောသူ၏ ပုန်းရှောင်ရာ မှောင်မိုက်၊ သေမင်းအရိပ်တစုံတခုမျှမရှိ။
Garry Kasparov has just been arrested outside the Moscow courthouse where the Pussy Riot trial is taking place.
ဂယ်ရီ ကက်စပါရော့ ဟာ ပူစီရိုင်းရတ်(ထ်)ကို ရုံးတင်စစ်ဆေးနေတဲ့ မော်စကို တရားရုံးရဲ့ အပြင်ဘက်မှာ အဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။
ထိုအပင်တို့၌ ငှက်တို့သည် အသိုက်လုပ်တတ် ကြ၏။ ထင်းရူးပင်တို့၌ တောငန်းတို့သည် နေရာကျ တတ်ကြ၏။
ဤအရပ်၌မရှိ။ မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း ထမြောက်တော်မူပြီ။ လာကြ၊ သခင်လျောင်းတော်မူရာ အ ရပ်ကို ကြည့်ကြလော့။
ကိုယ်တော်ကို ဘမ်းဆီးသောသူတို့သည် ကျမ်းပြုဆရာ၊ လူအကြီးအကဲများစည်းဝေးရာ ယဇ်ပုရော ဟိတ်မင်း ကယာဖထံသို့ ဆောင်သွားကြ၏။
ရှင်ဘုရင်အမိန့်တော်၌ တန်ခိုးပါ၏။ ကိုယ် တော်သည် အဘယ်သို့ပြုသနည်းဟု အဘယ်သူဆိုရာ သနည်း။
They did say he was not present at Chesapeake Energy Arena in Oklahoma City, where the Utah Jazz were to play against the Oklahoma City Thunder.
သူသည် အိုကလာဟိုးမားမြို့ရှိ Utah Jazz နှင့် Oklahoma City Thundar တို့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားမည့် Chesapeake Energy ကွင်းအတွင်းတွင် ရှိမနေခဲ့ကြောင်း သူတို့က ပြောခဲ့သည်။
File photo of Thailand's legislative hall where the National Reform Council heldasession to vote against the proposed constitution.
အမျိုးသားပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကောင်စီမှ အဆိုပြုထားသော အခြေခံ ဥပဒေမူကြမ်းကို ဆန့်ကျင်မဲပေးပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့သော ထိုင်း ဥပဒေပြုခန်းမ၏ ဓာတ်ပုံ။
ဤအရပ်တို့ကား အိမ်တော်အမှုစောင့်တို့သည် လူများပူဇော်သော ယဇ်ကောင်တို့ကို ပြုတ်ရသော အရပ် ဖြစ်ကြသည်ဟု ငါ့အား ပြောဆို၏။
ခြေနင်းရာမရှိ။ နက်လှသော ရွှံ့ထဲမှာ ကျွံပါပြီ။ လှိုင်းတံပိုးလွှမ်းမိုးရာ နက်သော ရေထဲသို့ ရောက်ပါပြီ။
မိန်းမတို့သည် အာရှရပင်အဘို့ ကုလားကာကို ရက်ရာအရပ် ဗိမာန်တော်နားမှာ ယောက်ျားအလိုသို့ လိုက်တတ်သော မိန်းမလျှာတို့ နေရာအိမ်များကိုလည်း ဖျက်တော်မူ၏။
မုယောစပါးကို၎င်း၊ မြင်းတော်များ၊ လားတော် များဘို့ မြက်ခြောက်ကို၎င်း၊ အလှည့်သင့်သည်အတိုင်း နေရာအရပ်သို့ ဆောင်ခဲ့ရကြ၏။
tieto (Slovak>Hungarian)pilosebácea (Spanish>Italian)evil (English>Croatian)de villiers (English>Tamil)sinóvia (Portuguese>English)habibi sa tagalog (Tagalog>Arabic)naslednje (Slovenian>Italian)szachy (Polish>English)shake before using (English>Arabic)gajar dikhana (Hindi>English)tegenvoorstel (Dutch>Spanish)validation des livrables (French>English)como se chama ilhas em francese (Portuguese>French)chacha ke ladke ki shaadi (Hindi>English)ano ibig sbhin ng noted (English>Tagalog)ilokano to tagalog translate (English>Tagalog)ispred (Serbian>Romanian)nacjonalizm (Polish>Spanish)искушаем (Russian>Latin)tại sao bạn không nói gì (Vietnamese>English)essensgewohnheiten (German>Dutch)acute (English>French)exterminarlas (Spanish>Vietnamese)decrivez votre famille (French>English)irrelatat (Maltese>Greek)